theZOMI: [Moemakadaily] 9th May - MoeMaKa Daily
[Moemakadaily] 9th May - MoeMaKa Daily
ကာတွန်းမောင်ရစ် - သမ္မတကြီးမှာ လဲစရာ အကြွေမရှိတော့ဘူး ကာတွန်း၊ မေ ၉၊ ၂၀၁၃
ဇာဂနာ၏ 'ဒုတိယ' စာအုပ်ထွက်
မိုးမခစာအုပ်စင်၊ မေ ၉၊ ၂၀၁၃
ကိုဇာဂနာရဲ့ မိသားစုလူကြုံကျေးဇူးကြောင့် ဇာဂနာရဲ့ ထောင်တွင်းမှတ်တမ်း ဒုတိယအုပ် 'ဒုတိယ' စာအုပ် ထွက်ရှိတာကို လက်ခံရရှိပါတယ်။ စာမျက်နှာ ၁၂၀ ခန့် ၀တ္ထုစာအုပ်အရွယ် သေသပ်တဲ့ စာအုပ်ကလေးပါပဲ။ ပထမအကြိမ် ၈၈ အရေးတော်ပုံနောက်ပိုင်း အဖမ်းခံရစဉ် အတွေ့အကြုံတွေကို 'ပထမ' ဆိုပြီး စာအုပ်ထုတ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာ နောက်တကြိမ် 'ဒုတိယ' အကြိမ် အဖမ်းခံရ၊ ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် စစ်ခုံရုံးကနေ ချမှတ်ခံရတာကို ရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ကြောင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသူတဦးရဲ့ ထောင်တွင်းမှာ ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရတာတွေကို ရေးသားထားရာမှာ အသနားခံ ဂရုဏာသက်စရာ၊ နာကျည်းစရာ၊ ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာ၊ ဒေါသထွက်စရာ စတဲ့ ခံစားချက်တွေနဲ့ လူသားတဦး အဖြစ်ထက် ဖြစ်လာသမျှ လောကဓံကို ခေါင်းမော့ပြီး ရင်ဆိုင်သူ၊ ရယ်သွမ်းသွေးနိုင်သူတဦးအဖြစ် ရေးသားထားတာကို ဖတ်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကျဉ်းကျနေတဲ့ အနုပညာသမားတဦးဟာ အနုပညာဖန်တီးမှု၊ ထုတ်လုပ်မှု၊ မျှဝေခံစား ဖြန့်ချိမှုတို့ကို အကျဉ်းချမခံဘဲ လွတ်မြောက်နေစေသူ၊ အနုပညာဖြင့် အသက်ဝိညာဉ်ကို အမြင့်မားဆုံး လွှင့်ထူနေဖို့ ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပုံတွေကို ဖတ်ရှုရပါတယ်။ ထောင်ထဲကနေ လွတ်မြောက်မဲ့တနေ့ကို ထိုင်စောင့်နေတာထက် ထောင်ထဲကနေ လွတ်မြောက်မှုတွေကို ထုဆစ်ပုံဖော်ပြီး ရပ်တည် ရှင်သန်မှုတွေကို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တို့နဲ့ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ မက်ထရို မြန်မာတိုင်းရင်းသားမိသားစုများနဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ၊ ဇွန် ၉၊ ၂၀၁၃၊ ဆန်းဒေး ဖိတ်စာ ထွက်ပါပြီ။
Labels: Cartoon Box, Min Kyaw Khine
ပါရီမောင်၊ မေ ၉ ၊ ၂၀၁၃ (အပတ်စဉ် တက်ဆက်မည်)
Leçon 10 (Lesson 10 )
အရောင်များ Les couleurs ၊ နေ့များ Les jours
အရောင်များ ကိုပြောဆိုရာတွင် " အရောင် " La couleur (n/f) လာကူးလား ၊အမနာမ် ဖြစ်နေသဖြင့် အရောင်တခုကို အပြည့်အစုံပြောဆို ရန်အတွက်
ဥပမာ အနက်ရောင် ဆိုလျှင် La couleur noire ဟူ၍ ရှေ့မှ အမနာမ်ဖြစ်သော La couleur စာလုံးကို ထိန်းညှိပေးရန်အတွက် noire တွင်eပေါင်းထည့်ပေးရပါသည်။
Le ciel bleu. လယ်စီးရဲလ် ဘလား(Le နှင့် bleu ကို အသံထွက်အတိအကျရေး ၍မရပါ) အပြာရောင်ကောင်းကင်
Une chemise rose. အယူးန် ရှမီးစ် ရို့စ် ။ ပန်းရောင် အင်္ကျီ(rose သည်eနှင့် အဆုံးသတ်ထားပြီး၍ အင်္ကျီသည် အမနာမ်ဖြစ်သော်လည်းeထပ်မထည့်ရပါ)
Un tableau noir. အန် တာဘလို နွား ။ ကျောက်သင်ပုန်း အမဲရောင်
မိမိပြောလိုသော အရာဝထ္တုများ ၏ အခေါ်အဝေါ်များကို အရောင် များဖြည့်စွက်ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြင့် လေ့ကျင့်ပါ။
နမ်တခုနှင့် အရောင်ကို တွဲဖက်သုံးသည့်အခါတွင် အရောင်စာလုံးများသည် နာမဝိသေသန အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။
Clair အရောင်ဖျော့ ဖြစ်ပြီး Foncé အရောင်ရင့်ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲပါသည်။
အရောင်များကို ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲ ရန်အောက်ပါလင့်ကို နားထောင်လေ့ကျင့်ပါရန် ။
အပြန်အလှန် စကားပြော သင်ခန်းစာများ မပေးခင်မှာ ကြိယာများ ကို နည်းနည်း ပြန်ပြောလိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာ ၄ ၊ ၅ တွေမှာ ပထမအုပ်စုဝင် အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ er နဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ ကြိယာတော်တော် များများကို ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ် သီးသန့်တအုပ် မှာ ကြိယာတွေရဲ့ Conjugaison ကိုပဲချရေး ပြီး သပ်သပ်ထားသင့်ပါတယ်။ ဝယ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ သင်ခန်းစာ ၆ မှာဖေါ်ပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ လိုမျိုး Conjugaison စာအုပ်ဟာ Dictionaire အဘိဓ္ဓါန်စာအုပ် တအုပ်လို အရေးကြီးလှပါတယ်။ ကြိယာတွေရဲ့ အဘိဓ္ဓါန် စာအုပ်တအုပ် ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ သင်ခန်းစာ ၅ မှာ အရေးကြီးဆုံး ကြိယာ ၂ခုဖြစ်တဲ့ " être "နှင့် " avoir " တို့ကိုလည်းကြေညက်နေအောင် လေ့ကျင့်ဖို့ ထပ်ပြောပါရစေ။
ရှေ့မှာဖေါ်ပြပြီးခဲ့တဲ့ ကြိယာတွေ အပြင် ဒုတိယ အုပ်စုနဲ့ တတိယ အုပ်စု ကြိယာတွေ မလာခင်မှာ အရေးကြီးတဲ့ နောက်ထပ် ကြိယာတခုပေးချင်ပါတယ်။ အသုံးလဲ ဝင်လှပါတယ်။
aller အာလေ ဆိုတဲ့ သွားသည် လို့ အဓိပ္ပါယ် ရတဲ့ ကြိယာပါ။ er နဲ့အဆုံးသတ်ပေမဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်သော ကြိယာ exceptionnel ဖြစ်ပါတယ်။
Aller (verbe infinitif ) Conjugaison အာလေ၊ သွားသည်
Je vais ရဗေး၊ ကျနော်သွားသည် Nous allons နူဇာလွန် ၊ ကျနော်တို့ သွားကြသည်
Tu vas ကျူဗား၊ မင်း၊ခင်ဗျားသွားသည် Vous allez ဗူဇာလေမင်းတို့၊ခင်ဗျားတို့ သွားကြသည်
il/elle vaအီလ်ဗား၊ အယ်လ်ဗား သူ၊သူမ သွားသည် Ils/Elles vont အီလ်ဗွန့်၊ အယ်လ်ဗွန့်သူတို့၊သူမ
Nous နင့် Vous တို့တွင် အသံဆက်သည်ကို သတိပြုပါ။ s တလုံးထည့်း ဖြစ်၍ z အသံ ကိုထွက်ရပါမည်။
သွားသည် ဆိုတဲ့ ကြိယာကို ပြောမှတော့ တွဲလျက်ဖြစ်တဲ့ လာသည် ဆိုတာကိုလည်း တလက်စထဲ လေ့ကျင့်လိုက်ပါဦး။ လက်တွေ့ ပြောဆိုနေတာတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါတယ်။ Venir ဗနီး ၊ဆိုတာက verbe infinitif ဖြစ်ပြီး ir နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ တတိယအုပ်စုဝင် ကြိယာဖြစ်ပါတယ်။ လာသည် ဟု အဓ္ဓိပါယ်ရပါသည်။
Venir (verbe infinitif ) Conjugaison ဗနီး၊ လာသည်
Je viens ရဗျန့်၊ ကျနော်လာသည် Nous venons နူဗနွန် ၊ ကျနော်တို့ လာကြသည်
Tu viens ကျူဗျန့်၊ မင်း၊ခင်ဗျားလာသည် Vous venez ဗူဗနေမင်းတို့၊ခင်ဗျားတို့ သွားကြသည်
il/elle vient အီလ်ဗျန့်၊ အယ်လ်ဗျန့် သူ၊သူမ လာသည် Ils/Elles viennent အီလ်ဗျန့်၊
ကြိယာ များကို စာကြောင်းတခုပြုလုပ်ရာတွင် ပြုလုပ်သူ ကတ္တားပုဒ် တခု အတွက် ကြိယာ တခုထက်ပို၍ သုံးနိုင်ပါသည်။
ပထမဆုံး ကြိယာတခုကိုသာ Conjugaison ပြုလုပ်ပြီး ကျန်ကြိယာများကို မူရင်းအတိုင်း verbe infinitif အနေနှင့်သာ သုံးစွဲရပါမည်။
ဥပမာ ။ ကျနော် အခန်းကိုတက်သွာပြီး စာအုပ် သွားရှာကြည့်မယ် ။
Je vais monter chercher le livre dans la chambre.
ရ ဗေး မောန့်တေး ရှက်ရှေး လ လိဗ် ဒေါန်း လာ ရွှန့် ဘ်ရ်
ဒီစာကြောင်းကိုကြည့်ရင် ကြိယာ ၃ခုဖြစ်တဲ့ vais(aller) monter chercher သွားသည်၊ တက်သည်၊ရှာသည် တို့ကို တွေ့ရပါမည်။ ပထမဆုံးကြိယာဖြစ်တဲ့သွားသည်ကိုသာ Conjugaison လုပ်ပြီး ကျန် ကြိယာများကိုတော့ မူလအတိုင်း verbe infinitif အနေနဲ့သာ သုံးရပါမည်။
Je cherche le livre dans la chambre. ကျနော်အခန်းထဲမှာ စာအုပ်ရှာသည်။
( ကြိယာ ၁ ခုတည်း ကိုသာသုံးသည်ဖြစ်၍ Conjugaison လုပ်ပေးရပါသည်)
သင်ခန်းစာ ၅ တုံးက ပေးထားတဲ့ ကြိယာတွေ၊ သင်ခန်းစာ ၉ က Prépositions ဝိဘတ် တွေ၊ ယခုသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့ အရောင်တွေကို အသုံးပြုပြီး အောက်ပါလေ့ကျင့်ခန်းများ ကို လုပ်ပါ။ မှားသည်၊မှန် သည်က အရေးမကြီးပါ။ လုပ်ရင်း ဖြင့် တိုးတက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁။ ကျနော် အလုပ် စလုပ်ပါသည်။ ( စ သည် နှင့် လုပ် သည် ကြိယာ ၂ ခု ပါရပါမည်။)
၂။ ကျနော် စာအုပ်များကို သိမ်းဆည်းပါသည်။
၃။ သူမ သီချင်းးနားထောင်သည်။ ( သူမ အင်္ဂလိပ်သီချင်းနားထောင်သည်။ ကျနော်ညတိုင်း ရေဒီယိုနားထောင်သည်။ စသည်ဖြင့် ချဲ့ထွင် ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။)
၄။သူတို့ မန္တလေးတွင် နေထိုင်ကြသည်။
၆။ ခင်ဗျား ကားကိုဆေးကြောသည်။
၇။ ကျနော်တို့ ဈေးထဲမှာ လှည့်ပါတ်နေသည်။
၈။ သူလှလှကို ဆက်သွယ်သည်။
၁၀။သူမ အပြာရောင်ကောင်းကင်ကို ကြိုက်သည်။( ချစ်သည်)
၁၁။ ကျနော် ရော့ခ် သီချင်း နားထောင်ရတာ ကြိုက်တယ်။( နားထောင် ၊ ကြိုက်)
၁၂။ အမေ ဈေးသို့ သွားသည်။ ( maman အမေ)
၁၃။ မြမြသည် ကိုမောင်အား ဖုံးဆက်သည်။
၁၄။ ကျနော် ခရီးမှပြန်လာသည်။
၁၅။ သူမတို့ အိမ်ထဲသို့ ဝင်သွားသည်။
( အဖြေများ ကို ရှေ့တပါတ်မှာ ဖေါ်ပြပါမယ်။ ကြိုးစားပြီးရေးကြည့်ပါ)
တကယ်တော့ ပြင်သစ်ဘာသာနဲ့ပြောဆို ၊ရေးသားရာမှာ လှုပ်ရှားမှု ၊ လုပ်ဆောင်မှု တွေကို ဖေါ်ပြရာမှာ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ တခုထဲနဲ့ သုံးနှုံး ရေးသားတာ၊ ပြောဆိုရတာတွေဟာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ အတိတ်ကာလပြဆိုသော Past Tense ကို မလွဲမသွေ ထည့်သွင်းသုံးစွဲမှ အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီကနေ့ခေတ်ပေါ်သင်ခန်းစာတွေမှာ ပြင်သစ်စာကို ဘာမှ မတတ်သေးလို့၊မသင်ဘူးလို့ ဆိုပြီး ကြည့်လိုက်ရင် Past Tense နဲ့ မကင်းပါဘူး။ ကြုံကြိုက်ရင် ပြင်သစ် ကလေးတွေရဲ့ဒုတိယတန်း၊ တတိယတန်း ဖတ်စာတွေ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြပေးသွားပါမယ်။
စကားပြော လေ့ကျင့်ခန်း သင်ခန်းစာ ( ၁ )
မြို့ထဲသွားခြင်း En ville
ဒီသင်ခန်းစာမှာ မိသားစု တခုရဲ့
ဖခင် Gil ဂျီးလ်
မိခင် Stéphanie စတေဖနီ ရယ် ကလေးတွေဖြစ်တဲ့
ရိုမန် Romain , လီဆာ Lisa , လီလူ Lilou တို့ပါဝင်ကြပါတယ်
ကောင်းမွန် ပီသပြီး ပြင်သစ်စာ လေ့လာသင်ကြားနေသူများအတွက် ထုတ်တဲ့ သင်ခန်းစာဖြစ်လို့ ဒီသင်ခန်းစာမှာပါတဲ့စာကြောင်းတွေ အတိုင်း လေ့လာသူတို့ အလျင်းသင့်ပါက ပြောဆိုသုံးစွဲခြင်း၊ ဝေါဟာရတွေကို မှတ်သား ခြင်းများပြုလုပ်ပါက အချိန်တိုအတွင်း ကောင်းမွန်သော အသံထွက်ဖြင့် တတ်မြောက်ပါမည်။ စားသားများနှင့် သဒ္ဒါရင်းလင်းချက်များကို လာမည့်အပါတ်တွင် ဖေါ်ပြပါမည်။ ပြင်သစ်အသံနှင့် ကျွမ်းဝင်မှုရှိစေရန်နားထောင်ပေးပါ။
Labels: French, Maung Paris
ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၉၀ - ပြည့်နှစ် - န.၀.တ. လက်ထက်တွင် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင် သပိတ်မှောက်ရာ၌ ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ဦးဆောင် ဆရာတော်တပါးအဖြစ် ပါဝင် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သောကြောင့် တိပိဋက ဆရာတော် အပါအဝင် သံဃာတော်များနှင့် အတူ ၁၉၉၀ - ခုနှစ်မှ ၁၉၉၃ - ခုနှစ်အထိ (၃) နှစ်နီးပါး အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တွင် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသော၊ ၁၉၉၆-ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ ပဏိစ္စာရာမ ပရိယတ္တိကျောင်းတိုက်၌ ရတ္တညူ မဟာနာယကအဖြစ် သီတင်းသုံးနေထိုင်လျက် ၂၀၀၇- ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး၌ ပဏိစ္စာရာမ ပရိယတ္တိကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးနေသော ဆရာတော်အား မြောက်ဥက္ကလာပမြိ်ု့နယ်၌ ဦးဆောင် သံဃာဟု ယူဆ၍ စစ်အစိုးရမှ ပဏိစ္စာရာမ ပရိယတ္တိကျောင်းတိုက်ကို ၀င်ရောက် ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးသောကြောင့် ၂၀၀၇- ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိပ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ တပည့်သံဃာများထံ လှည့်လည် သီတင်းသုံး နေထိုင်တော်မူသော ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဉာဏ၀ံသ သည် ၁၃၇၄-ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၂) ရက် ၉.၃.၂၀၁၃ စနေနေ့ ညနေ(၄း၄၁) နာရီအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိပ်မြို့နယ် နဘူးကျေးရွာ အောင်သိဒ္ဓိကျောင်း၌ ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ပြီး ၉.၄.၂၀၁၃ နေ့တွင် ဆရာတော် ပျံလွန်ခြင်း (၁) လပြည့် အခမ်းအနားအား မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ ပဏိစ္စာရာမ ပရိယတ္တိကျောင်းတိုက်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားအား မကွေးကျောင်းဆရာတော် ဦးပါမောက္ခ အပါအ၀င် ရွှေဝါရောင် သံဃာတော်များ ကြွရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားကို နံနက် ၉း၀၀ နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပြီး နံနက် ၁၁း၃၀ တွင် အောင်မြင်စွာ အဆုံးသတ် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
၁၃၂၈-ခုနှစ်တွင် မူလ ကျောက်ကုန်းတောရ မေဒိနီကျောင်းတိုက်ကို တည်ထောင်ခဲ့သော ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ အာဠာရ သည် "ကျောက်ကုန်းတောရ မေဒိနီကျောင်းတိုက်ကို တည်ထောင်ခဲ့တာ ဦးဉာဏ၀ံသ အတွက် တည်ထောင်ခဲ့တာဟု" အတိအလင်း မိန့်ကြားပြီး ဆရာတော် ဦးဉာဏ၀ံသကို ကျောင်းတိုက် ၀န်ဆောင် နာယကအဖြစ်ဖြင့်ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခဲ့ပါသည်။
နာယကတာဝန် ယူပြီးသည့်နောက် ကျောက်ကုန်းတောရ မေဒိနီကျောင်းတိုက်ကြီးကို ပထမငယ်တန်း ပထမလတ်တန်း ပထမကြီးတန်း ဓမ္မာစရိယတန်း စာသင်သားသံဃာ (၂၀၀) ကျော် ဖြစ်အောင် ပဓာန နာယက ဆရာတော်အဖြစ် တာဝန်ယူ စီမံအုပ်ချုပ်ပြီး သာသနာရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ကျင်းပသော ပထမပြန်စာမေးပွဲ ပထမငယ်၊ ပထမလတ်၊ ပထမကြီးတန်း တို့၏ ပုစ္ဆကတာဝန်၊ ဓမ္မာစရိယတန်း၏ ပုစ္ဆာကတာဝန်၊ ပါဠိပါရဂူ ပုစ္ဆကတာဝန်၊ တိပိဋ္ဋက စာမေးပွဲ ပုစ္ဆကတာဝန်များနှင့် နိုင်ငံတော် သံဃသမ္မုတိ သံဃာ့ကိုယ်စားလှယ်၊ နိုင်ငံတော်ဗဟို သံဃာ့ဝန်ဆောင်၊ နိုင်ငံတော်ဝိနည်းဓိုရ်၊ တိပိဋကဓရ ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ သြ၀ါဒါစရိယတာဝန်၊ ရွှေကျင် ဂိုဏ်လုံးဝန်ဆောင် နာယက တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရင်း ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၉၀ - ပြည့်နှစ် န.၀.တ. လက်ထက်တွင် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင် သပိတ်မှောက်ရာ၌ ဆရာတော်သည် ရန်ကုန်တိုင်းတွင် ဦးဆောင် ဆရာတော်အဖြစ် ပါဝင် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည့်အတွက် တိပိဋကဆရာတော်နှင့် အခြား သံဃာတော်များနှင့်အတူ ၁၉၉၀ - ခုနှစ်မှ ၁၉၉၃ - ခုနှစ်အထိ(၃) နှစ်နီးပါး အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်တွင် ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၉၃-ခုနှစ်တွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသောအခါ အထိန်းသိမ်းခံရသော ဆရာတော်များသည် မိမိ၏ မူလ သီတင်းသုံးသော ကျောင်းများတွင် သီတင်းသုံးနိုင်ပါသော်လည်း ဆရာတော် ဦးဉာဏ၀ံသ သည် လက်ရှိ ကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိ တပည့် စာချဆရာတော်များမှ န.၀.တ၊ န.အ.ဖ. ဟု ခေါ်ဆိုသော စစ်အစိုးရများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆရာတော် ဦးဉာဏ၀ံသ အား နိုင်ငံတော်ဆန့်ကျင်သည့် ဆရာတော်ဖြစ်သည့်အတွက် ကျောင်းတိုက်မှ လက်မခံနိုင်ပါ ဟု ပြောဆို၍ (မိမိကိုယ်တိုင် တည်ထောင်ခဲ့သော ကျောင်းတိုက်ကို) တပည့် စာချပုဂ္ဂိုလ်များက မတရားသဖြင့် အဓမ္မ လုယူ သိမ်းပိုက်ခဲ့သောကြောင့် ဆရာတော်သည် မိမိ၏ တပည့်သံဃာများ၏ ကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံး နေထိုင်ခဲ့ရပါသည်။
ဆရာတော်သည် ၁၉၉၆-ခုနှစ်မှ စတင်၍ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ ပဏိစ္စာရာမ ပရိယတ္တိကျောင်းတိုက်၌ ရတ္တညူ မဟာနာယကအဖြစ် သီတင်းသုံးနေထိုင်လျက် ၂၀၀၇- ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး၌ ပဏိစ္စာရာမ ပရိယတ္တိကျောင်းတိုက်တွင် သီတင်းသုံးနေသော ဆရာတော်(မိမိ)ကို မြောက်ဥက္ကလာပမြိ်ု့နယ်၌ ဦးဆောင်သံဃာဟု ယူဆ၍ စစ်အစိုးရမှ ပဏိစ္စာရာမ ပရိယတ္တိကျောင်းတိုက်ကို ၀င်ရောက်ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးသောကြောင့် ဆရာတော်သည် "မိမိကြောင့် တပည့်သံဃာများ ရှာဖွေမေးမြန်းဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံရသည့်အတွက် စိတ်မကောင်းသဖြင့်" ၂၀၀၇- ခုနှစ်မှ စတင်၍ ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိပ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ တပည့်သံဃာများထံ လှည့်လည် သီတင်းသုံးနေထိုင်ရင်း ၁၃၇၄-ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၁၂) ရက် ၉.၃.၂၀၁၃ စနေနေ့ ညနေ(၄း၄၁) နာရီအချိန်တွင် ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိပ်မြို့နယ် နဘူးကျေးရွာ အောင်သိဒ္ဓိကျောင်း၌ ဘ၀နတ်ထံ ပျံလွန်တော်မူခဲ့ပါသည်။
Labels: ABMA, Portraits
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် မတ်လ (၂) ရက် တောင်သူလယ်သမားနေ့မှ စတင်၍ "သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း"အား အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး မိဘပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများအား အလေးထားဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်မှာ (၆) နှစ်ကျော်ကာလသို့ ရောက်ရှိ လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယခုဆိုလျှင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ရန်ကုန်) အပြင် ပြည်၊ ကြို့ပင်ကောက်၊ ပဲခူးမြို့များတွင် တိုးချဲ့၍ အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အခြားသော နယ်ဒေသမြို့နယ်များရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ပရဟိတဆေးခန်းများသို့ လစဉ်ဆေးဝါးများ ထောက်ပံ့ပေးလျှက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် "ကျန်းမာခြင်းသည် လာဘ်တပါး" ဟူသော ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း အများပြည်သူတို့အတွက် ကျန်းမာခြင်းသုခများ ရရှိနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အနေဖြင့် အလှူရှင်၊ စေတနာရှင်များနှင် လက်တွဲကာ အစဉ်ကြိုးစားလျှက် ရှိပါသည်။
၁.၅.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့တွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ ပဲနွယ်ကုန်းမြို့ရှိ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှာက်မှု ပရဟိတလုပ်ငန်းများ အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ပေးနေသော Hundard Power မိသားစု၏ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း၌ လိုအပ်လျှက်ရှိသော ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ခွဲစိတ်ကုတင်နှင့် ခွဲစိတ်ကုတင် (Operation Chair)နှင့် ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများအား လှူဒါန်းပေးခဲ့သည်။ ၄င်းခွဲစိတ် ကုတင်သည် ကျပ်ငွေ (၁၄) သိန်းကျော်ခန့် တန်ဖိုးရှိပြီး အများပြည်သူအလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းထားသော အလှူငွေများဖြင့် ဝယ်ယူထားသော အများပြည်သူတို့၏ ကောင်းမှုအလှူတော်ပင်ဖြစ်သည်။ Hundard Power မိသားစု၏ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းအနေဖြင့် ခွဲစိတ်ခန်းသုံး ခွဲစိတ်ကုတင် (Operation Chair) နှင့် ခွဲစိတ်ခန်းသုံးပစ္စည်းများ ပြည့်စုံစွာရရှိပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ပဲနွယ်ကုန်းမြို့ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာများ မှ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့လူနာများနှင့် ခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်သော လူနာများအတွက် ခွဲစိတ်ကုသမှု ပြုလုပ် ပေးနိုင်တော့မည်ဖြစ်သည့်အတွက် "ခွဲစိတ်ကုသဖို့အရေး ရင်အေးရပြီ" ဖြစ်ပါကြောင်း အများပြည်သူ အလှူရှင်အပေါင်းတို့အား အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။
ယ တြာ
ကာတွန်းအောင်မော် ဖေ့ဘုတ်မှ ပြန်လည်ကူးယူပါသည်။
မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒါဘိဝံသ ဘ၀နတ်ထံပျံလွန်တော်မူသည်မှာ ငါးနှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီ။ "ပူဇာ စ ပူဇနေယျာနံ" ပူဇော်ထိုက်သူကို ပူဇော်ခြင်းသည် မြတ်သောမင်္ဂလာမည်၏" ဟု ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ မိန့် မှာသည့်အတိုင်း အောက်မေ့ဖွယ် အထိမ်းအမှတ်ပွဲ ကျင်းပခြင်းဖြင့် ဆရာတော်ကြီး၏ ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ ကို ပူဇော်ပေးဆပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ ပူဇော်ခြင်းဖြင့် အပူဇော်ခံရသူ ဆရာတော်ကြီးလည်းဂုဏ်တက်၍ ပူဇော်ကြသူ ရဟန်းရှင်လူပြည်သူ ပြည်သားတို့ သည်လည်း ဂုဏ်တတ်ရပါသည်။
အမေရိကန် ကဗျာဆရာကြီး Frost ကွယ်လွန်ခြင်း တနှစ်ပြည့် အခမ်းအနားတွင် ထိုစဉ်က သမ္မတဖြစ်သူ ဂျွန်အက်ဖ် ကနေဒီ ပြောခဲ့သည်ကို မှတ်သားရဖူးသည်။ "နိုင်ငံတနိုင်ငံကို ကြည့်လျှင် ထိုနိုင်ငံ၌ လူကောင်းသူကောင်းများ မည်သို့ ပေါ်ပေါက်လာသည်ဆိုသော အချက်ကို လေ့လာရသည်သာမက ထိုနိုင်ငံက လူကောင်းသူကောင်းများကို မည်သို့ တန်ဘိုးထားသည်ကိုလည်း ကြည့်ရပါမည်။" ထို့ ကြောင့် "ပူဇာ စ ပူဇနေယျာနံ" တရားတော်အရ ချီးမြှင့်ပူဇော်ထိုက်သူကို ပူဇော်ခြင်းသည်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသာမက နိုင်ငံကျက်သရေနှင့် လူမျိုးကျက်သရေကိုလည်း တိုးစေပါသည်။
သာသနာတော်နှင့်ပတ်သက်၍ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဆုပ်ကိုင်ထားသောမူဝါဒမှာ "သာသနာ့အန္တရာယ် ကာကွယ်ကြ" ဟူ၍ပင်။ ထို့ ကြောင့် "သာသနာ့ အန္တရာယ်ကျရောက်နေပြီ၊ ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ စုပေါင်းကာကွယ်ကြ" ဟုဩ၀ါဒပေးလေ့ရှိ၏။ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လည်း သာသနာ့အရေးမှလွဲ၍ မည်သည့်အရေးမျှ ဂရုစိုက်တော်မမူ။
ဆရာတော်ကြီးသည် စစ်အစိုးရကို သပိတ်မှောက်ကံဆောင် ၍ ထောင် ၂၂လကျခံရသည်ကို ကြံ့ကြံ့ခံရင်းထောင်တွင်း အကျဉ်းကျ ခံရသော ရဟန်း၊သာမဏေများ ရဲဘက်စခန်း၌ သေဆုံးပျက်စီးရခြင်းကို စိတ်ထိခိုက်ရရှာ၏။ ၂၀၀၇ခုရွှေဝါရောင် သံဃာ အရေးတော်ပုံ၌ ထိခိုက်ပျံလွန်ကြသော သံဃာများအတွက် စိတ်နှလုံးညှိုးနွမ်း ပူပန်ရသည်။ ယင်းသို့ ပူပန်ခြင်းကြောင့် "သာသနာ့အန္တရာယ် ကျရောက်နေပြီး" ဟု တပည့်ရဟန်းသံဃာများနှင့် ဒကာဒကာမတို့ အား အရေးတကြီးမိန့် ကြားခဲ့သည်။ တပည့်အပေါင်းအား "သာသနာ့အရေး"ကိုသာ အလေးထားဆောင်ရွက်ကြရန် အထူးမိန့် ကြားသည်။ သာသနာ့အန္တရာယ်ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအပေါ်ကျရောက်မည့် အန္တရာယ်ကိုလည်း ကာကွယ်ပြီးဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ဆိုရခြင်းမှာ အခြားသော ၀ါဒန္တရ၊ ဘာသန္တရ၊ ဂဏန္တရ ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ကဲ့ရဲ့ သဂြိုဟ်စကားတင်းဆိုမှုကို ရှောင်လွဲနိုင်ရန် အလို့ ငှာ ခိုင်မာသော "သာသနာရေးမူဝါဒ" ကိုချမှတ်ခြင်းဖြစ်၏
ဤနေရာ၌ စကားအလျဉ်းသင့်၍ မိုးမခ၀ိုင်းတော်သားတဦးဖြစ်သူ မောင်ရစ်က မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီးကို ဖူးတွေ့ ပြီး ရေးသားခဲ့ပုံကို တင်ပြလိုပေသည်။ "ကျနော်နဲ့ ဆရာတော်ကြီးတို့ ဆုံရတဲ့ရေစက်က ၂၀၀၇ နိုဝင်ဘာလက ၂၀၀၈ ဧပြီလအထိသာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ မိုးမခ၀ိုင်းတော်သားတွေ တတ်စွမ်းသမျှ ဆရာတော်ကြီးအတွက် ဝေယျာဝစ္စတွေ ၀ိုင်းလုပ်ပြီး ကုသိုလ်ယူခွင့်ရခဲ့တယ်။ အရိုးသားဆုံး၊ အဖြူစင်ဆုံး၊ အဖြောင့်မတ်ဆုံး၊ အလှပဆုံး သက်ရှိတရားတခုကို ဖူးတွေ့ ခွင့်ရလိုက်တာပဲ။"
မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာရေးလောက၌ ထင်ရှားသော ပါဠိဂါထာတပုဒ်ရှိ၏။ ထိုဂါထာကို ဘုန်းကြီးပျံပူဇော်ပွဲ၊နှစ်ပတ်လည် ပူဇော်ပွဲတို့ တွင် တွင်ကျယ်စွာ ဟောပြော အသုံးပြုလေ့ရှိ၏။
သရီရဿ စ ဂုဏဿ၊ ဒူရမစ္စန္တမန္တရံ။
သရီရံ ခဏ၀ိဒံ္ဓသိ ဂုဏာ စကပ္ပဌာယိနော။
"လူ့ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် လူ့ ခန္ဓာကိုယ်က ဆောင်ရွက်သော ဂုဏ်တို့ သည် မတူညီကြပေ။ လူ့ ခန္ဓာကိုယ်သည် သက်တမ်းအလျှောက်သာ တည်တံ့၍ ခန္ဓာကိုယ်ကို မှီ၍ဖြစ်ရသော ဂုဏ်ဒြပ်တို့ သည်ကား ကမ္ဘာရှည်အောင် တည်တံ့နေပေသည်။"
ဖော်ပြပါ ဂါထာ ပါဠိသည် ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီး လောကအတွက်၊ သာသနာအတွက် စွန့် စား၊ စွန့် လွတ်တတ်သော သတ္တိနှင့် အမြော်အမြင်ကြီးမှု အားလုံးတို့ ကို ခြုံငုံ၍ "လူသေသော်လည်း နာမည်မသေ"ဟူသော သဘောကို ဖေါ်ပြခြင်းပါ။
ထိုနည်းတူပင် ကဗျာဆရာကြီး ဆရာဇော်ဂျီကလည်း "လူသည် ဓမ္မအလျောက် သေဆုံးရသည်မှန်သော်လည်းသေပြီးသောအခါ ကျန်ရစ်ကောင်း၊ ကျန်ရစ်သင့်သည့် "ဒို့ မြေ၊ ဒို့ စာ၊ ဒို့ ဘာသာ သစ္စာအရောင်" များကို ကဗျာဖြင့် ရှင်းလင်းစွာရေးသားခဲ့၏။
ဪ …. လူ့ ပြည်လောက၊ လူ့ ဘ၀ကား၊
အိုရ နာရ၊ သေရဦးမည်၊
မှန်ပေသည်တည့် …. ။
သို့ တ ပြီးကား၊ သင်သေသွားသော်၊
သင်ဖွားသောမြေ၊ သင်တို့ မြေသည်၊
သင်၏မျိုးသား၊ စာ စကားလည်း
နိုဂုံးအနေအားဖြင့် ဆိုရသော် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗာရာဏသီမြို့ ၌ Press Club ခေါ် သတင်းစာဆရာ အသင်းတိုက်ရှိ၏။ အသင်းတိုက် အ၀င်ဝ၌ အင်္ဂလိပ်ခေတ်၊ ဗြိတိသျှအစိုးရကို အနိုင်မခံ၊ အရှုံးမပေးခဲ့သော သတင်းစားဆရာကြီး၏ ရုပ်တုကိုထုလုပ်ထားသည်ကို တွေ့ ရ၏။ အကယ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌လည်း "အာဇာနည်မော်ကွန်းတိုက်"စသည်ဖြင့် ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော် မစိုးရိမ် ဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒါဘိဝံသ အတွက် ရုပ်ထုတော်ထုလုပ်ပြီး နောင်လာနောင်သား ရဟန်းသာမဏေ၊ လူကြီးလူငယ်မျိုးဆက်သစ်များအား အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ချစ်တတ်သော အမွေကောင်းများ လက်ဆင့်ကမ်း၍ ဂုဏ်ပြုပူဇော်သင့်ပါကြောင်း ရေးသားအပ်ပါသတည်း။
Labels: ဆရာတော် ဦးဝိလာသ
စီစဉ်တင်ဆက် အရှင်ပညာနန္ဒ၊ ပြည်ပရောက်မြန်မာရဟန်းတော်များအဖွဲ့၊
မိုးမခရုပ်သံ၊ မေ ၇၊ ၂၀၁၃
ခင်ဗျားက (စိန်စု)ဋီကာဖွဲ့ နေ။
မင်းတို့ ကိုကယ်မယ့်သူ မရှိတော့ပါလား။
မြေမဲ့ယာမဲ့ ပညာမဲ့ ငါ့ နှမလေးရေ
နေ့ နေ့ ညည
တထိတ်ထိတ် တလန့် လန့် 
သမ္မတကြီးက မုန့် ဟင်းခါးရောင်း။
တိုင်းပြည်ကို (ရှီကျင်ပင်း)က အုပ်ချုပ်။
ဆိုင်းဘုတ်လေး တွေ့ လားတွေ့ ရဲ့။
ဆိုင်းဘုတ်ကြီး တွေ့ လားတွေ့ ရဲ့။
(၂၁-ရာစု ဆိုရှယ်နယ်ချဲ့ ဆန့် ကျင်ရေးတိုက်ပွဲသစ်)